Khilaafka Romelu Lukaku iyo Tuchel oo Heshiis laga gaaray kadib tilaabo uu qaaday Lukaku | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Khilaafka Romelu Lukaku iyo Tuchel oo Heshiis laga gaaray kadib tilaabo uu...
Khilaafka Romelu Lukaku iyo Tuchel oo Heshiis laga gaaray kadib tilaabo uu qaaday Lukaku
Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa soo jeediyay in isaga iyo Chelsea ay diyaar u yihiin inay ka gudbaan hadaladii Romelu Lukaku uu siiyay wareysi usbuucii hore.
xidigan ayaa u sheegaySky Sport Italia in aanu ku faraxsanayn nolosha Stamford Bridge isla markaana uu doonayo in uu ku laabto Inter Milan.
28-sano jirkaan ayaa markii dambe laga saaray kooxda kulanka axada ee Premier League ee Liverpool, Tuchel ayaa shaaca ka qaaday ciyaarta ka dib in wadahadal la yeelan doono Isniinta.
Shir jaraa’id oo uu qabtay ka hor kulanka Arbacada ee EFL Cup-ka Tottenham Hotspur, Tuchel waxa uu qiray in Lukaku uu raaligelin ka bixiyay falkii uu sameeyay, Macalinka wuxuu intaa ku daray in xaaladdu ay hadda tahay mid deggan.
Tuchel ayaa u sheegay suxufiyiinta: “Waan ku faraxsanahay inaan ku bixinay waqtigii loo baahnaa inaan si degan u eegno oo aan si degan uga hadalno, tani waa midda aan sameynay, wuu cudur daartay, wuxuuna dib ugu soo laabtay kooxda tababarka maanta, aniga ahaan waxa ugu muhiimsan Waxa uu ahaa in la fahmo in aanay ahayn ula kac ah.
Midda labaad waxay ahayd in tani ay tahay markii ugu horreysay ee uu ku dhaqmo, xitaa ka hor markii uu dareemay inuu diyaar u yahay inuu ciyaaro fikirkiisa ka dib dhaawacii soo gaaray, waxaana u maleynay inuu u baahan yahay inuu dib u la qabsado xoojinta kooxda.
Lukaku ayaa la filayaa inuu ka soo muuqdo kooxda kulanka soo socda ee Spurs ama kulanka Chesterfield ee FA Cup dhamaadka Isbuucaan.
Ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha maanta oo aad maalin walbo kala socotaan Warbaahinta Ciyaaro.com La taliyaha kooxda Borussia Dortmund Matthias Sammer ayaa...
Kabtanka Manchester United Harry Maguire oo Qarka u saaran yahay inuu...
Sawirro: Xasan Sheekh oo la kulmay madaxda IMF, xilli uu maanta...
Wararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Martial, McGinn, Zapata, Traore, Barisic, Melo,...
Maraakiib jariifay kalluunka Soomaaliya oo lagu daray liis halis ah +...